रबिको प्रश्न – हिजो भारतले सिमा मिच्दा ओली सरकारलाई प्रश्न गर्ने ‘गगन-विश्वप्रकाश’ कुन दुलोमा छन् ? – Halkhabar kura
देउवा सरकारले ज्ञानेन्द्र कार्की मार्फत पत्रकारलाई जानकारी गराएको हो, विरोध गरेर भारतलाई पत्र पठाएको होइन !
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालीभूमिमा सडक बनाएको बारे दिएको नेपाल विरोधी अभिव्यक्तिलाई देउवा सरकारले काउन्टर नगरेको भन्दै सिधाकुरा मार्फत रबि लामीछानेले यसरी देउवाको खोइरो खन्ने :-
देशको सिमाबारे प्रधानमन्त्री देउवा भन्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले दह्रिलो अडानलिएर नेपाली संसदबाटै भारतलाई सत्यमेव जयतेको पाठ पढाएका थिए ।
ओलीको धेरै आलोचना गरे पनि चुच्चेनक्सा र भारतले सिमा मिचेको बारे कुटनैतिक नोट पठाएर देशको इज्जत र स्वाभिमान कायम राखेका थिए ।
तर देउवा सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले खुलमखुला नेपाली सिमानामा बाटो बनाएको घोषणा गर्दा चुसम्म गर्न सकको छैन, सरकारी प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की मार्फत जारी गरेको विज्ञप्ति सिमा मिचेकोमा भारतको विरोध गरेर पठाएको होइन केबल पत्रकारलाई जानकारी गराएको मात्रै हो ।
लिपुलेक कालापानी भारतले मिच्दा हिजो ओली सरकारलाई प्रश्न गर्ने गगन र विश्वप्रकाश कहाँ छन अहिले ? कि देश जोगाउने जिम्मा ओलिको मात्र हो भन्दै गगन र विश्वप्रकाशलाई समेत सशक्त ढंगले सिमाको कुरा नउठाएको भन्दै रविले आलोचना गरेका छन् ।
तर स्मरणीय छ रविले गगन र विश्वप्रकाशको आलोचना गर्नु अघि नै गगन र विश्वप्रकाशले यो बिषयमा प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरिसकेका छन ।
अब हेर्नुहोस उक्त भागको भिडियो
मन्त्री आले र पुर्व मन्त्री योगेश भट्टराई बीच आरोप प्रत्यारोप चलीरहदा नारायणहिटी छानबिन समितिका एक सदस्यले एक स्वासमा जवाफ दिए र फोन राखे। साथमा ओमीक्रोन तयारी बारे स्वास्थ राज्य मन्त्री Live, अबिन्ता राउतको मुद्दा अब सर्वोच्चमा।
Previous ललिता निवास जग्गा प्रकरण, पहुँचवालालाई बचाउन मुद्दा नचलाउने प्रपञ्चमा देउवा सरकार (भिडियो)
Next निर्लज्ज अनुहार छोप्ने “लाजको टालो” हो यो ”मधेश प्रदेश” नामाकरण – जयप्रकाश गुप्ता